Miandry ny fangatahanstika
Mangataha, dia hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jao. 16:24
Ny vavaka no fomba natendren’ny lanitra hahazoana fahombiazana eo amin’ny ady atao amin’ny ota sy eo amin’ny fitomboan’ny toetra kristianina. Ny hery miasa mangina rehetra avy any an-danitra, izay tonga ho valin’ny vavaka natao tam-pinoana no hanatanteraka izay rehetra nangatahn’ilay fanahy feno fitalahoana. Azontsika atao ny mangataka ny famelana ny helotsika, ny mangataka ny Fanahy Masina, ny toetra tahaka ny an’i Kristy, ny hery sy fahendrena hanaovana ny asany, ny fanomezam-pahasoavana rehetra efa nampanantenainy, fa izao no teny fikasana:”ho azonareo izany”.
I Jesosy no mpanampy antsika, ao Aminy ary amin’ny alalany no tsy maintsy handresentsika. Miandry ny fangatahanao mikasika izany ny fahasoavan’i Kristy. Homeny anao ny hery sy ny fahasoavana araka izay ilainao raha mangataka Aminy ianao. Ny fivavahan’i Kristy no hamatotra sy hihazona ny hafanam-po tsy masina rehetra, ka hampifoha ny fahavitrihana sy ny fifehezan-tena ary ny fitiavana miasa. Izany no hitranga na dia eo amin’ireo raharahan’ny fiainana andavanandro aza ka mitarika antsika hahay mitsitsy, hahay mifandray amin’ny hafa, handà tena ary hiharitra ny fihafiana tsy am-pimonomononana. Hiseho eo amin’ny toetra ny Fanahin’i Kristy mitoetra ao am-po ka hampitombo lafin-toetra mendrika sy hery ambony. “Ampy ho anao ny fahasoavako” (2 Kôr. 12:9) hoy i Kristy.
Ataovy ny ezaka rehetra hampisy mandrakariva ny firaisana eo amin’i Jesosy sy ny fanahinao. Tokony hisy ny fotoam-bavaka eo anivon’ny ankohonana, kanefa tsy tokony hataontsika ambanin-javatra indrindra indrindra ihany koa ny vavaka mangina fa izany no ain’ny fanahy. Tsy hisy velively ny fitomboan’ny fanahy raha vao atao ambanin-javatra ny vavaka. Tsy ampy raha ny fiaraha-mivavaka eo anivon’ny ankohonana fotsiny ihany sy izay iarahana amin’ny besinimaro. Amin’iny fotoana maha-irery anao iny, dia velaro ho eo anoloan’ny mason’Andriamanitra mpandinika ny zavatra rehetra ny fanahinao. Ny sofin’Andriamanitra mpihaino vavaka irery ihany nonatao handre ny vavaka mangina. Tsy misy sofina hafa liana te handre ka hahazaka ny vesatry ny fangatahana toy izany. Amin’ny fivavahana mangina no hahafaka ny fanahy amin’ireo hery mahataona manodidina sy ny fanelingelenanarehetra. Amin’ny alalan’ny finoana tony sady tsotra no hihazonan’ny fanahy ny firaisana amin’Andriamanitra ka hanangonany ho azy ireo tara-pahazavana avy amin’Andriamanitra izay hanafy hery sy hanohana azy ao anatin’ny ady ataony amin’i Satana.